Home समाचार सासू र बुहारीको भिडियोले विश्वभर तहल्का , के गरे त्यस्तो ?
२७ भाद्र २०७८, आईतवार १९:२६
अब म तिम्रो आमालाई हा’त हा’ल्छु । पतिले सम्झाउदैं त्यस्तो नगर्न भन्छन् । तर कविता आफ्ना पतिको कुरा मान्दिनन् । त्यसपछि उनी आफ्नी सासूमाथि हा’त हा’ल्न थाल्छिन् ।
सो समयमा, घरमा उपस्थित बच्चाहरु रोएको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ । अभियुक्त बुहारीले पनि आफुमाथि हा’त’पात भ’ए’को उजुरी दिएका छन् । त्यस प्रकरणमा, राजेन्द्र पार्क प्रहरी चौकीक प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्रका अनुसार प्रहरी भिडियो र उजुरीलाई एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सोही आधारमा मुद्दा दर्ता भएको छ । दोषीमाथि क’डा का’र’बाही हुने उनले प्रष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा बुहारीको हर्कतलाई लिएर चर्को आ लो चना भइरहेको छ ।
पछाडि पोस्टलोकबहादुरको बयान : बच्चाहरुले पनि देखे त्यसपछि मैले …..
अगाडि पोस्टदसैंलाई नयाँ नोट असोज ४ देखि
बा हिरियो पुरै भिडियो : सेती नदीमा जानु आघि दुई साथीहरुलाई यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन् ! (भिडियो)
नेपाली सेनामा सयौं जनाका लागि यी पदहरुमा भर्ना खुल्यो (सूचनासहित)
फेरी किन जान थाल्यो बिजुली ? कुलमानले दिए यस्तो उत्तर